ब्लग - Lumbini Times
फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा म फलानो जातको छोरा÷छोरी भएकोमागर्व गर्छु, म फलानो जिल्लाबासी भएकोमा गर्व गर्छु भन्दै स्टाटस् पोष्ट गर्ने धेरै भेटिन्छन् तर, त्यहि ब्यक्तिले म नेपाली भएकोमा गर्व गर्छु भन्ने स्टाटस् पोष्ट गरेको भने मुश्किलै भेटिन्छ । तर, यसको ठिक बिपरित यो देश यस्तै छ, यो देशको नेताहरु खराब छन् । कस्तो हो […]
किरियामा बस्नु भएका गोविन्दका वुवा र श्रीमतीलाइ देख्ने वित्तीकै मन थाम्न बढो मुस्किुल पर्यो । हजुरआमाको वरिपरि खेलिरहेका तीन छोरीहरुलाइ हेर्दा उनीहरुका आँखाले सायद बाबालाइ खोजिरहेको थियो । तर बाबाको काख भारतीय ज्यादतीले लुटिदिइ सकेको थियो ।
विद्यार्थिहरु सजिलै विद्यालय तथा क्याम्पसमा अध्ययन गर्न आँउथे । पुलकै कारण बुटवल र मोतिपुरको दुरि निकै छोटो भएको थियो ।अब लामो र फेरोबाटो पार गरेर स-साना बालबालिकाहरु कसरि विद्यालय सम्म पुग्लान ? आज मलाइ यहि चिन्ताले सताइरहेको छ ।
नेपाल सरकार शिक्षा निर्देशिका २०७२ लागु गरिएको छ । एकातिर लागु गरिनुपर्छ भनेर बिधालयलाइ बाध्य बनाइरहेको स्थिति छ । अर्को तिर पैसा र प्रेसरको भरमा निर्णय भइसकेका कुरा शिक्षा कार्यालय आफैले उल्टाएर हिडेको छ । हरेक शैक्षिक शत्र शुरु हुनु भन्दा एक महिना अगाडी विद्यालयहरुमा कक्षा थप गर्ने निर्णय भइसक्नुपर्छ ।
बैसट्ठी सालको मध्य भदौतिर म माथिल्लो डोल्पाको यात्राको लागि निस्किएँ । मैले यो यात्रा गर्नुको पछाडि लामो पृष्ठभूमि थियो । देशको सबैभन्दा ठूलो जिल्ला, फोक्सुण्डो ताल, शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा मैले स्कूले जीवनताका सुनेको थिएँ ।
प्रत्येक बर्ष माघ १६ गतेलाइ सहिद दिबसको रुपमा मनाउदै आएको छौ। देश र राष्ट लागी हासी हासी आफ्नो जिवन को आहुती दिने ति महान सपुत नै सहिद हुन ।
राष्ट्रपति बिद्या भण्डारीका चुनौती र अवसरहरु
गणतन्त्र नेपालको दोश्रो राष्ट्रपति लागि २०७२ साल कार्तिक १५ गते भएको संसदिय प्रतिस्पर्धा मार्फत बिद्या भण्डारी गणतन्त्र नेपालको दोश्रो राष्ट्रपतिको रुपमा निर्वाचित भईन । भने नेपालको ईतिहासमा पहिलो पटक राष्ट्रको अति सम्मानिय र उच्चतम पदमा पूग्ने महिलाको रुपमा आफुलाई स्थापित गर्न सकिन । आफना कुराहरु दृढ रुपमा राख्न सक्ने नेतृका रुपमा चर्चित बिद्या भण्डारी २०५० […]
तिहारमा भैलो खेल्न पठाउने बलिराजा को थिए ?
दिदी बहिनी दाजु भाईको मिलनको चाड तिहारको रमाईलो पक्ष भैलो र देउसीको नाचगान हो । भैलो तथा देउसी खेल्न युवा र केटाकेटी मात्रै होइन, प्रौढ र पाका उमेरका मान्छेहरु पनि निकै रौसिन्छन् । टोली नाईकेले लय हालेर नाटकीय शैलीले भट्टयाउने र सहभागीहरुले भैलो तथा देउसीरे घन्काउँदै सामूहिक रुपमा नाँच्ने चलन नेपालको मौलिक विशेषता हो । […]
“हाम्रो एउटा केस मिलाउने बेला प्रधानन्यायाधीश दारीवाला थिए। त्यतिखेर हामीले २ करोड दिएको हो। दारी आफैंले लिएका हुन्।” एक जनाको यति अभिव्यक्तिका भरमा कसैप्रति कुनै आरोप प्रमाणित हुँदैन, आरोपित व्यक्ति कायम प्रधान न्यायधीश भएमा यतिकै भरमा महाभियोग लगाउने आधार पनि पुग्दैन र निवृत्त व्यक्तिलाई यतिकै भरमा पक्रेर भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउन पनि मिल्दैन । किन? प्रोसेक्युटेबल […]
पुरुष शासक कि सहयात्री ?
धन कुमारी अर्याल
महिलाहरुको हक र अधिकारका विषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट आवाज उठिरहेको र मस्यौदा संविधानका लागि सुझाव संकलन गर्नका लागि जब विभिन्न क्षेत्रमा भेलाहरु भए सो समयमा उठेका आवाजहरुबारे फेसबुकमा धेरै चर्चामा र अखबारको पहिलो हेडलाईन बने । पुर्वका महिलाहरुले यदि श्रीमानले दोश्रो विवाह गरेर घरमा श्रीमती ल्याउछन भने महिलाहरुले पनि दोश्रो विवाह गरी दोश्रो श्रीमानलाई पनि सँगै […]
पहिचान सहितको संघियताको माग र समाधानको उपाय
नेपाल प्रहरीका बरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सहित दर्जन भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाने र घाइते हुने गरि भएको कैलालीको घटनाले फेरी माओबादि द्वन्दकालको स्मरण गराउन पुग्यो । नेपाल सरकार सहित संबिधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य चार राजनैतिक दलहरुले संघियता र सिमाङ्कनका बारे प्रारम्भिक निर्णय लिए पश्चात शुरु भएको यो आन्दोलन अत्यन्त एक आततायी र दर्दनाक मोड […]
मैले जानेका सुर्यदाई
मैले चिनेको, भोगेको र जानेको सुर्यप्रसाद प्रधान । जो एउटा खुल्ला पुस्तक जस्तै हुनुहुन्थ्यो । जुन पुस्तकको प्रत्येक पानामा ईतिहास कोरिएको छ । उक्त पुस्तकमा सुन्दर र सभ्य बुटवलदेखि विकासका सफल योजनाहरु देखिन्छन । यतिमात्र कहाँ हो र आफ्नै नगरको खबरबाट टाठा रहेका नागरिकहरुलाई बुटवलबाटै सुचनाको शक्ति प्रदान गरेको यर्थाथता पढ्न पाईन्छ । उहाँको जीवन […]
यो अंग्रेजी उपन्यास हो । यो उपन्यासको रचना सन १७१३ बाट शुरू भएर क्रमशः लेख्दै जाँदा १७२५ मा समाप्त भएको कुरा उल्लेख छ र १७२६ मा एकिकृत रूपमा संशोधन सहित पुनः प्रकाशित भएको पाइन्छ । यसका लेखक जाेनाथन स्विफ्ट हुन् , उनी अायर्ल्याण्डका थिए । उनी सामुद्रिक यात्री थिए । त्यसै यात्राको सन्दर्भमा भोगेका कुराबाट […]
‘‘जबसम्म बोली तिम्रो मुखबाट निस्कंदैन तबसम्म त्यो बोली तिम्रो अधिनमा हुन्छ । जसै त्यो तिम्रो मुखबाट निस्कन्छ अनि तिमी त्यसको अधिनमा हुन्छौ ।’’ – दार्शनिक सुकरात सामान्यतः मुखबाट निस्केको शब्द, वाणी वा वचन नै बोली हो । अर्को अर्थमा आपसको कुराकानी तथा बोलचाल गर्ने तरिका पनि बोली हो । धक नमानीकन वा मौकाअनुसार बोल्न सक्ने […]
दृष्टि बोकेका जुझारु स्रष्टा : सरुभक्त
सरुभक्त को हुन् ? कसैले प्रश्न गर्दा आउने एउटै उत्तर हो – साहित्यकार । उनका काव्यहरु पढ्ने अवसर नपाएका मान्छेहरुलाई समेत थाहा छ– उनी नेपाली वाङ्मय क्षेत्रका सुपरिचित साहित्यकार हुन् । आजको नयाँ पुस्ताहरुले साहित्यकार सरुभक्तका साहित्यिक कृतिहरु पढिरहेको छ र नेपाली वाङ्मयमा सरुभक्तले उजागार गरेका नवीन प्रयोग र विषयवस्तुहरुलाई मस्तिष्कका प्रत्येक ठेलीहरुमा ‘सेभ’ गरिरहेको […]
हामी उठ्छौ अनि अघि बढ्छौ
रातको अध्यारोलाई चिर्दै सूर्यले पूर्वमा लाली पोतेर प्रभातको अर्को सुनौलो बिहानी बोकेर आउछ । रात र दिन जस्तै सुख र दुख पनि जीवनको महत्वपुर्ण पाटो हो । मानिस प्रकृति मै जन्मन्छ, प्रकृति मै हुर्कन्छ । प्रकृति मै बाच्छ र प्रकृति मै मर्छ पनि । प्रकृतिबिना मानवीय जीवन अकल्पनिय छ । हरेक प्राणीको अस्त्तित्व प्राकृतिक पन्चतत्व […]
अब त भन्नुहोस ‘हामी उठ्नेछौं’
निर्मल श्रेष्ठ/सुरज गुरुङ्ग
हामीहरु दुबै जना नेपालमा भूकम्प जानु भन्दा करीब दुई साता अघि मात्रै जन्मथलोबाट कार्यथलो हङकङ फिर्ता आएका थियौ । त्यतिबेला हामीहरुको मिसन छुट्टै थियो । हङकङबाट सिधै काठमाण्डौ ओर्लिएर काठमाण्डौ त्यसपछी त्रिशुलीमा र्याफटीङ ,पोखराको अल्ट्राफ्लाईट उडान, साईक्लिीङ ,मुस्तांगमा घोड सवारको मज्जा र प्रकृतिको सुन्दरतालाई क्यामरामा कैद गर्दै फर्केर त्यहाका फोटोहरु हङकङ चीन र मकाउमा प्रदर्शन […]
न्युजरुम @ ११:५६
शनिबार, बिदाको दिन । तर पत्रकारका लागि शनिबार होस् कि अन्य सार्वजनिक बिदा, कार्यदिन भन्दा खासै फरक हुन्नन् । २०७२ वैशाख १२ गते शनिबार । म ११ बजे कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यालय पुगेर काम सुरु गरिसकेको थिएँ । एकैछिन सम्पादकीय बैठकमा उपस्थित भएपछि अपारान्ह १२ बजेको समाचार वाचनको तयारीमा लागें । मेकअप गरें । मौसम परिवर्तनसँगै […]
बैंक तथा वित्तिय संस्थाको मर्जर र कर्मचारीको अवस्था
भनिन्छ समय परिवर्तनशिल छ र त्यही समयले सिंगो समाजलाई परिवर्तन गराउंछ । परिवर्तन समाजको हरेक क्षेत्रमा जोडिएको छ र समय अनुसार परिवर्तन आवश्यक पनि छ । कुनै एउटा समय थियो त्यो समयलाई स्मरण गर्न धेरै अतितमा पुग्नु पर्दैन, नेपालमा बैक तथा वित्तिय संस्था स्थापनाको लहर नै चलेको थियो भन्नुपर्छ । वित्तिय संस्थाको नियमनकारी निकाय अर्थात् […]
भूकम्पले घर ढलेनि नेपालीको साथ छुट्दैन
कस्तो छ सर अवस्था ? उताबाट जवाफ आयो ‘बेहाल छ ।’ मैलै कल्पना गरेको थिइन यस्तो जवाफको तर बास्तविकताले स्वीकार गर्न बाध्य बनायो । मलाइ मात्र होइन विनाशकारी भूकम्पले धेरैलाइ अविश्वासको विच विश्वास गर्नु पर्ने बनायो । प्रकृति यति कठोर भइन् की धर्तीमात्र नभइ नेपालीको मन पनि हल्लाइ दिइन । जमिन त यसै भासियो जमिनसंगै […]
यसरी बनायौं दुई दिनमा ४८ घर
२ दिनको श्रमदानबाटट ४८ अस्थायी घर बनाएर हामी नुवाकोटको कुमारी गाउँवाट फर्केका छौं । हामीसंग काठमाडौं क्षेत्र नं। ४ चुनिखेलका १० जना कालिगढ साथीहरू, थापाथली ईन्जिनियरिङ कलेज, डव्लु आर सी, नेपाल ईन्जिनियरिङ कलेज, कस्मस ईन्जीनियरिङ कलेज, कान्तिपुर सिटी कलेज, कान्तिपुर ईन्टरनेसनल कलेज लगायत विभिन्न क्याम्पसका नेविसंघ आवद्ध ४० भन्दा वढि ईन्जीनियर प्राविधिक साथीहरू, पव्लिक पोलिसी […]
ए नेता ज्यू ! विपतलाइ पार लगाउने राजनीति खै ?
बुटवल। भूकम्प आयो, भूकम्प गयो भन्ने त्रासदी छ मुलुकभरी । बालबालिका, बृद्धवृद्धा तथा महिलाहरुमा बैशाख १२, १३ र २९ गते गएका भूकम्प (१२ गते पछिका पराकम्पन) हरुले बढी त्रासदी दिएकोे छ । निरन्तर आई रहेका भूकम्पका पराकम्पनहरुले आम नागरिकलाई आतंकित बनाएको छ । भूकम्पले निम्त्याउने जोखिमका बारेमा जानकार नभएता पनि त्यसले दिएको त्रासका कारण ‘अब […]
आफ्नै देशको धज्जी उडाउदँदै भारतीय मिडिया
धूत्र्याइँले हरेक समयमा काम गर्दैन । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको छवि प्रचार गर्दै हिड्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुलाई नेपालको भूकम्पमा उनीहरुको कस्तो मूल्यांकन भयो त्यो सम्भवतः बुझे । खासगरी भारतीय उद्धार टोलीको अस्वभाविक विदाइ, भारतीय मिडियाप्रति नेपालका जागरुक मध्यमवर्गको आक्रोश, उत्तरप्रदेश, बिहारले केन्द्र सरकारसँग राहतमा गरेको प्रतिस्पर्धा, र बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीशकुमारलाई राहतसहित जनकपुरधाम जान रोक्ने केन्द्र सरकारको निर्णयले […]
भारतीय मिडियालाइ खुला पत्र
मेरो देशमा आइलागेको विपत्तिमा भारतले गरेको सहयोगप्रति म हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्छु । नेपालभित्र र बाहिर रहेका सबै नेपाली सहयोगप्रति आभारी छौं । तर जब म आफ्नो मातृभूमिभन्दा बाहिर रहेको नेपालीका हिसाबले भारतीय समाचार र रिपोर्टिङहरु हेर्छु, मुटु छियाछिया भएर आउँछ, मनमा गहिरो चोट अनुभव गर्छु । त्यो चोट ७.९ रेक्टर स्केलको भूकम्पले पुर्‍याएको […]
कहाँ छौ तिमीहरु ?
विनाशकारी भूकम्पको कारण धेरै आमावुवा गुमे । दाजुभाइ दिदीबैनीलाइ पनि दैवले खोस्यो । भोलि यो देशलाइ आफ्नो काँधमा बोक्ने कैयौ स साना बालबालीकाहरु पनि हामीमाझ रहेनन । नेपाली युवाहरुले खाडीमुलकमा वर्षौ पसनिा बगाएर बनाएका घरहरु क्षण भरमा नष्ट भए । स्वदेशमै परिश्रमको पसिना बगाएर बनाइएका बासहरु आँखै अगाडि ढल्दा कस्तो भयो होला ती दाजुभाइहरुलाइ ? […]
लोग्ने विदेश हुने महिलामाथि गिद्धे आँखा किन ?
‘सयौ जुनी पाउन सकिन्छ सकिन्न यो जुनी त हजुरैलाइ भो, एकै जुनी बाँचौ मिठो माया साँचौँ किन चाहियो सयौं जुनी त्यो, तिमीलाई मेरो माया अजम्बरी भो तिमीलाइ जीवन समर्पण गरेँ तिमीलाई, मेरो माया अपर्ण गरे….’ अत्यधिक चर्चामा रहेको यो गीत सयौ जोडीहरुको मन मुटुमा बस्न सफल भएको छ । यसले प्रेमप्रेमिका सम्वन्धलाई मात्र होइन श्रीमानश्रीमती […]
पत्रकारिता : कमाई थिएन, तै पनि नशा बन्यो
मान्छेको जिवन चक्र पनि अनौठौ हुने रहेछ । कसलाई कहाँबाट कहाँ पुर्या‍उँछ भन्ने थाहा नै नहुने । जिवनको चक्र घुम्ने मात्र होईन, आँधीहुरी आएपछिको अवस्थाजस्तै, उलटपलट नै बनाउने रहेछ । कतिपय कुरा पत्याउन नसक्ने पनि हुन सक्छ । तर, यथार्थ बोल्ने, लेख्ने आफ्नो पेशा नै अँगालियो । सत्य, तथ्य र निष्पक्षलाई मूलमन्त्र मानेको पनि १७ […]
कसैलाई घरबार नहुँदाको सुर्ता त कसैलाई दरबार नहुँदाको। भूपूदेखि चालुसम्मका हाम्रा पीएमहरू भने देश विकास गरिदिने माया–दैत्य भेट्न नसकेकोमा चिन्तित छन्। त्यो कुर्सी नै मायावी भएर हो कि, महामनाहरू तिलस्मी सिंहदरबार पस्नासाथ देश बनाउने डिंगो अरू कोही नभएर कार्यकारी प्रमुख भनिने जन्तु नै हो भन्ने भुसुक्क बिर्सेर बिनाको खोजीमा भट्किएको कस्तूरी भइदिन्छन्। एकबारको जुनीमा प्रधानमन्त्री […]
एउटा सुप्रसिद्ध कथामा आन्तोन चेखवले एउटा विशेष पात्रको सिर्जना गरेका छन् । गुरभ नामको त्यो विवाहित पात्र नयाँ नयाँ महिलाहरुलाई सहजताका साथ आकर्षित गर्न र उनीहरुसित शारीरिक सम्बन्ध कायम गर्न खप्पिस हुन्छ । तर महिलाहरुबारे कुनै बहस चल्यो भने उसले उत्तिकै सहजताका साथ उनीहरुको भद्दा आलोचना गर्छ । कुनै पनि महिलाबारे उसले सकारात्मक धारणा राख्दैन […]
गुलावको फुल दिदैमा प्रेम हुन्छ र ?
मान्छे जन्मिएपछि त्यसको मृत्यु पनि निश्चित छ,तर त्यति फरक छ कि त्यो कहिले र कसरी भन्ने कसैलाइ थाहा छैन ।सुखमा हस्किने र दुखमा आत्तिने त मानवको बानी नै हो तर आज आफुसंग भएको चिज भोलि नहुन सक्छ र आज नभएको चिज जीवनमा प्राप्त गर्न धेरै समय पनि नलाग्न सक्छ जुन कुरा कस्ले बुझोस । समयको […]
त्यो रातो गुलाफ !
खै मलाई थाहा छैन भ्यालेन्टाइन्स सप्ताहअन्तरगत आज कुन दिन हो । यो पनि थाहा छैन कतिऔ हो । जेसुकै होस् । मलाई आज भन्न मन लागिरहेको छ । त्यो गुलाफको बारेमा । जुन गुलाफ तिमीले मलाई दिन चाहदाचाहदै पनि दिन सकेनौ र पनि मसँग आइपुगेको थियो त्यो गुलाफ । हुन त त्यो नाथे गुलाफको के […]
नेता ज्यू ! जनताकाे आशुँले पाेल्ला
पुस माघको जाडो खप्नै नसकिने हुन्छ । त्यतिबेला अलिकति पनि घामको न्यानोपन पाउदा कसलाई आनन्द आउदैन र ? म कुरा गर्दैछु करिव १० दिन अगाडीको । जब केही महिला दिदीबहिनीहरु त्यही घामको तातोपनासंगै आफ्ना रमाइला गफ गर्दै हुनुहुन्थ्यो चौरमा बसेर । त्याे बेला बन्दको माहोल भएकाले सबै स्कुले विद्यार्थी पनि बाटोमै खेलिरहेका थए । त्यतिबेलै […]
बुद्धवल्ली–बटौलीका अंशरुप बुद्धहरु
–पं. बाबुराम भट्टराई
ओसो रजनीशका पुस्तकहरु पढ्दा कतिपय ठाउँमा मैले के पनि पढें भने जहाँ अतिरिक्त प्रतिभा व्यक्त हुन्छ, चाहे त्यो पैसा कमाउने कुरा नै किन नहोस्, त्यहाँ बुद्धत्वका आंशिकै सही, लक्षण प्रकट हुन्छन् । उनले सर् हेनरी फोर्डलगायतका केही विश्वका धनाढ्य व्यक्तिलाई पनि त्यस कोटिमा राखेका छन् । हाम्रो त देशै सानो । प्रतिभा फुल्न पनि त […]
आफ्‍नै बाबुबाट बारम्‍बार बलात्‍कार हुँदा…
मेरो नाम पूजा। मेरो यो नाम सक्कली होइन। काभ्रेमा बुवा र हजुरबाबाट एउटी किशोरी बलात्कृत भएको समाचार पढ्नुभएकै होला नि। हो, तिनै अभागी बलात्कृत किशोरी हुँ म। जसले मलाई बलात्कार गरे, तिनलाई म मन नलागीनलागी बुवा भन्दैछु यहाँ। अब उनलाई बुवा भन्ने पक्षमा म छैन। जसले मलाई बारम्बार बलात्कार गरे, तिनलाई बुवा भन्नु कि पति? […]
उफ्, के देख्नुपरेको !
उफ्, कसरी भनौं – हामीले भोट हालेर (हुनत मैले भोट हाल्न पाइन, अरुले नै मेरो नाममा भोट हाले भन्ने सुनेको थिएँ) पठाएका सभासद (त्यस्ता अराजकलाई हामीले पठाएको हुँदै हैन) ले मध्यरातमा संविधानसभामा तोडफोड गरे । यति अराजक र असभ्य त मलाई नेपालमा माओवादीले मच्चाएको युद्धमा पनि भएको थिएन होला । त्यति अराजकता र अराजनीतिक आतंक […]
संघियताको खिचडी कहिले पाक्ला ?
बुटवल । आज माघे सक्रान्ती । सायद सबैले खिचडी खानु भयो होला । खिचडी खाने यो क्रम जारी रहदा खिचडीको बारेमा केहि कुरा गर्न मन लाग्यो। खिचडी मिठो भए पनि यसको शाब्दिक प्रयोग भने नकारात्मक मनोभाव वा टिप्पणी जनाउन प्रयोग गरिन्छ । कस्तो खिचडी जस्तो मान्छे रहेछ। फलानो पाटीका मान्छेले के खिचडी पकाउदै छन् ? […]
भ्रष्ट्राचार विरुद्धमा लाग्दा पाएको जन्म दिनको उपहार
नापी कार्यालयका नापी सर्भेक्षक घुस लिँदालिदै पक्राउ, फलानो जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा अख्तियारको छापा, फलानो गा.वि.स. सचिव घुस लिँदालिदै पक्राउ, मालपोतका कर्मचारी घुस लिँदालिदै पक्राउ, यस्ता समाचार त आम नेपालीलाई दालभात जस्तै भईसक्न थाल्यो । भ्रष्टाचार रोकौ देश लाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाऔँ, भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गरौँ भनेर देशको नारा नै भई सकेको छ । कहिले तेलमा भ्रष्टाचार, […]
‘लौ छोरो भयो । अब यसले परिवारको विडोँ थाम्ने भयो ।’ जन्मने वित्तिकै उसको काम–कर्तव्यको घोषणा हुन्छ । परिवारमा हर्षाेल्लासको वातावरण छाउँछ । मानौ कुनै निकै नै ठूलो उपलब्द्धि हाँसिल गरेको झै सबैले फलानाले छोरा पायो भनेर गाउन थाल्छन् । जन्मदिने आमाले पनि राम्रो स्याहार पाउँछे । छोरो त झन् भुइँमा खुट्टा टेक्नै पाउन्न, एकपछि […]
मरिला’नु के छ र ?
कृष्ण बहादुर ओझा
जब व्यक्ति समस्याबाट ग्रसित हुन्छ । तब व्यक्ति सामूहिक हुन चाहन्छ । सामूहिक रुपमा संगठित बृहत स्वरुप हो । राष्ट्र जहाँ प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो स्वाधिनता रक्षाका लागि आफ्नो छातीमा हात राखी एउटै मूलभूत उदेश्यका साथ क्रियाशिल रहन्छ । जहाँ प्रत्येक जनताको भोकको गाँस, नाङ्गाको कपास र वास आवास बन्न सक्ने प्रतिनिधिको छनौट गरिन्छ । जसले […]